Nyochaa: "Insularity, njem dị n'ime nke ndị na-agba ọsọ", nke Ralph del Valle | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nyochaa: "Insularity, njem dị n'ime nke ndị na-agba ọsọ", nke Ralph del Valle dere
A mgbe gara aga Agwara m gị banyere Insularity, njem dị n'ime nke onye na-agba ọsọ, na Ralph del ndagwurugwu, onye ikpeazụ nke Onyinye Desnivel maka Akwụkwọ 2014. Onye mbipụta akwụkwọ ahụ nwere obiọma zitere m otu akwụkwọ, nke karịrị ihe m tụrụ anya ya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa atọ agafeela kemgbe ahụ. Mana echela na o were m ihe dịka ọnwa atọ iji gụọ ya: Agụọla m ma gụghachi ya n'oge ahụ niile ọtụtụ oge. Na m ga-eme ya ọzọ. Echiche, ọnọdụ, ntụgharị uche, akụkọ n’onwe ya masịrị m nke ukwuu nke na ugboro ugboro ana m eche na ọ dị m mkpa ịgụgharị paragraf ahụ ọtụtụ oge, wee nọrọ nkebi ahịrịokwu “aracha” n’isi m dị ka nke na-agbanye swiiti na ọnụ.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ, ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ọ bụla, ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa ịmalite ịgba ọsọ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ị ghọta ihe mere ndị mmadụ ji agba ọsọ iji akpụkpọ ụkwụ ha (ma ọ bụ jiri ịnyịnya ígwè ha, jiri okporo osisi ha rie ụzọ), olee ihe dị iche ọ na-eme ma ọ bụ naanị na ị chọrọ ịmata ihe kpatara ndị mmadụ ji agba ọsọ, ị ga-agụ akwụkwọ a. Ikekwe nkwupụta nke akụkọ ahụ malitere, "Nwoke na-agba ọsọ bụ nwoke na-agba ọsọ" yiri ka ọ na-emegide gị. Mana ị ga-aghọta ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ a, ọ bụghị naanị ịgba ọsọ. N'ihi na Ogba aghara bụ a n'ime ime nke ahụ na-enyocha ọtụtụ ihe, na nke ahụ, ma ị na-agba ọsọ ma ọ bụ na ị naghị agba, n’ezie ị na-eche na a maara gị na ụfọdụ n’ime ha, ma ọ bụ n’ókè dị ukwuu ma ọ bụ karị.
Ogba aghara Ọ bụ ntakịrị nke a iju akwụkwọ. Na nke ahụ, n’akwụkwọ, bụ otito, ma ọ dịkarịa ala ebe ahụ ka ebum n’uche m. Ọ bụ akụkọ banyere otu nwa okorobịa nke jidere echiche ya ma jiri nwayọọ nwayọọ na-agwa anyị akụkọ na, dị ka ndị na-agụ akwụkwọ, anyị ga-ewughachi. Ma, akụkọ a adịghị mfe. Onye mbido anyị bụ nwoke kewapụrụ iche, onye, ​​mgbe ịhụnanya dara, ọdịda nke ọ na-enwebeghị ike imeri, na-agagharị na Berlin, opekata mpe nke ahụ, n'ihi na ọ naghị ekwu kpọmkwem ebe ọ nọ. N'ezie, ihe niile gbanyere n'ụdị ụdị omimi. Anyị amaghị aha ya, ọ na-ejikwa mkpịsị aka kpọtụrụ ndị ọzọ, belụsọ ndị na-enweghị isi na ndị odide dị mfe na-agafe n'ụzọ n'oge ụfọdụ na ndụ ya ịlaghachi.
Edere akụkọ a dị ka a ga - asị na ọ bụ a edetu. N'echiche a, ọ nweghị ụdị nkọwapụta akọwapụtara nke ọma, mana kama ọ bụrụ na onye na-akwado ya na-aga n'ihu, oge ụfọdụ na-ede ihe na oge ndị ọzọ pere mpe, na itinye obere ndụ ya nke na-eme ka echiche ya pụta ìhè ma gbalịa ịchọta nkọwa maka ndụ ya, dị ka onye dịrịla ndụ ihe ọ na-ebi.
The protagonist-amalite akụkọ ya n'etiti "Oge oyi Prussia", na ọsọ ọsọ. Ma, Gini mere i ji agba oso? Nke a bụ otu nnukwu ihe amaghi na ya onwe ya na-anwa ịkọwapụta: ihe ndị kpatara ya iji zụlite ike nke ọ na-eme, ihe kpatara ya ji na-akwagide ya, ihe kpatara o ji chọọ ya, dị ka iku ume. Ka akụkọ a na-aga n’ihu, onye protagonist na-ekpughere anyị na, n’ihi ọdịda mmụọ ya na mgbe ọ rụsịrị ebe ọ na-aga, ọ kpebiri ịma onwe ya aka: ịgba ọsọ marathon ọkara na oge nke ọnwa 6. Mana onye anyi n’agha bu obughi onye egwuregwu.
Ever nwetụla mgbe ị chọrọ ịgafe ihe ịma aka nke yiri ka ọ gaghị ekwe gị omume? N'ihi na nke a bụ otu n'ime isiokwu ndị dị n'akwụkwọ a na-ekwu maka ya: ike nke mmụba, mbọ na mkpa isetịpụ ebumnobi iji merie erughị eru nke mmadụ.
"Ndụ bụ idozi ọpụrụiche banyere akaụntụ"
Maka m, nke a bụ ahịrịokwu nke chịkọtara kachasị mkpa akụkọ a, ma ọ dịkarịa ala nke kachasị emetụ m n'ahụ, nke na-agbanyekwa n'isi m, dị ka ahịrịokwu mkpali ndị ahụ nwere obi ụtọ nke ukwuu na onye ọ bụla nwere ike bụrụ In a laithaus n'etiti abalị Na na akwụkwọ jupụtara na ahịrịokwu na ọmarịcha iberibe.
N'ezie, akwụkwọ ahụ dum na-adabere na echiche a. Na njedebe, mgbe anyị dọrọchara echiche mbụ (gbaa ọsọ), anyị mechara nwee mkpebi juputara na olile anya. Maka na, n’ikpeazụ, anyị nwere ike idozi ụgwọ ndị ahụ pụtara ìhè.
Ogba aghara. Njem ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nyochaa: "Insularity, njem dị n'ime nke ndị na-agba ọsọ", nke Ralph del Valle dere
'Onye ịgba egwu ikpeazụ nke Mao', akụkọ eziokwu nke Li Cunxin
RBA weputara akwukwo Agatha Christie